Ikhabhinethi yeChic enebhafu yabucala eshushu kwiHlathi eNtsha - I-Airbnb
Ikhabhinethi yeChic enebhafu yabucala eshushu kwiHlathi eNtsha
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAnthony
Kumda weHlathi eLitsha kwaye libekwe entliziyweni yelizwe elikhulu laseBritane yiBriars Lodge, iphupha lakho lokubalekela elizweni.
Eyakhelwe ngesandla ngothando kwaye yenzelwe ukunika intuthuzelo kunye nobumfihlo, ineembono ezingaphazamisekiyo zemithi, amasimi kunye neentyatyambo zasendle. Yonwabela ubusuku obuneenkwenkwezi ukusuka kwibhafu yakho yabucala eshushu ngeglasi yamaqamza okanye uthathe uhambo lwemizuzu emi-5 ukuya kwilali yaseBransgore kunye neepubs zethu zasekhaya eziphumelele ibhaso.
Isilayi esigqibeleleyo sesitayile, izulu lasemaphandleni!
Ilungele izibini ezitshatileyo, eli gumbi linegumbi lokulala elineen-suite litsha kraca kwaye lihle. Ifakwe ikhitshi entle enezixhobo ezikumgangatho ophezulu, igumbi lokuphumla / indawo yokuhlala kunye nebhalkhoni ehonjisiweyo yangaphandle egcwele ibhafu yabucala eshushu, usenokufumana ukutyelelwa nguBindy ikati.
4.99 · Izimvo eziyi-282
INeacroft yindlu entle kumda wehlathi eNtsha.
Ababuki zindwendwe u-Anthony noPhilippa baya kuba sesandleni nanini na kunokwenzeka ukuze bakubulise kwaye baphendule imibuzo yakho. Ukuba asifumaneki, kukho isikhokelo esipheleleyo sencwadi enamacebiso asekuhlaleni, izalathiso kunye nabafowunelwa abaluncedo. Ukungena okugudileyo nokulula, izitshixo ziya kubonelelwa kwibhokisi yokutshixa ukuba asikho kwisiza.
Ababuki zindwendwe u-Anthony noPhilippa baya kuba sesandleni nanini na kunokwenzeka ukuze bakubulise kwaye baphendule imibuzo yakho. Ukuba asifumaneki, kukho isikhokelo esipheleley…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bransgore